Olee otú Idozi ID3 Tags Ọma, melite tracks 'ese, ọnụ ọgụgụ, aha, genre wdg
Olee otú Idozi ID3 Tags Ọma, Update n'Ụzọ 'omenkà, Number, Mbụ, Genre wdg
Fixing ekwekọghị mp3 mkpado na-akpaghị aka na-ezi nkọwa banyere a egwu ma ọ bụ song bụ ihe na-ada mgbagwoju ma na nri ọmụma, ọ bụ a dị mfe ime. Ọ bụrụ na ị na onye mgbe niile download ikpo music na mgbe oyiri utu aha, ebe na-ekwesịghị ịdị nkọwa banyere traktị ma ọ bụ egwu mysteriously akwụsị, mgbe ahụ, ihe kwesịrị agafe uche gị bụ idozi ID3 mkpado. E nwere ọtụtụ ngwaọrụ na pụrụ ịbụ nnọọ uru na nhazi ID3 mkpado akpaghị aka site na gwara nwunye. Ị nwere ike imelite tracks 'ese, ọnụ ọgụgụ, aha, genre wdg E nwere ọtụtụ ngwaọrụ na nwere ike idozi ID3 mkpado ma isiokwu a ga-elekwasị anya na abụọ nke ọtụtụ ndị na-eji.
Part 1.Fix na ID3 mkpado gị MP3 collection na Apple iTunes
Part 2.Fix ID3 Tags Ọma TunesGo
Part 1.Fix na ID3 Tags nke gị MP3 gbasara mkpokọta na Apple iTunes
N'ihu na-eji iTunes mkpa ka ị budata ma wụnye ya. Mgbe ị ọma mere ihe a, mgbe ahụ, ị ​​dị njikere na-aga!
Photo 1: Idozi na ID3 mkpado gị MP3 collection na Apple iTunes
ITunes nwere dịghị ikike nke ijikwa ya nchekwa data na Ya mere, ọmụma gaghị ozugbo kwadoo. Nzọụkwụ mbụ ebe a bụ iji họrọ tracks ma ọ bụ songs ahụ n'ọbá akwụkwọ na mgbe ahụ enweta 'Sinụ Info'. Site na nri ịpị, ị ga-nwere otu nhọrọ nke renaming na nchekwa nke ahọrọ traktị. Ị nwere ike ịnyegharị tracks 'genre, omenkà, aha nakwa dị ka album. Ebe ahụ aha ị chọrọ! Ọzọkwa ị ike ịnyegharị ọ bụla egwu ma ọ bụ song site na isoro n'elu nzọụkwụ.
Photo 2: iTunes Ohere, Idozi na ID3 mkpado gị MP3 collection na Apple iTunes
Photo 3,4: Renaming n'Ụzọ ma ọ bụ Ndetuta egwu ọkpụkpọ & ndị ọzọ Fields
Agbakwụnye Album Art / Logo
ITunes mgbe tinye artwork-akpaghị aka. Ọrụ ahụ pụrụ nanị ga-eme site iTunes Art mbubata. Na ya ị nwere ike mfe tinye album oyiyi ma ọ bụ ọ bụrụ na ị mkpa ka ịgbakwunye gị họọrọ oyiyi ma ọ bụ foto. Ọzọ ọsọ ụzọ ime nke a bụ site na ịme ọpịpị (Control + Pịa) ma ọ bụ nanị na nri na ịpị na mgbe ahụ họrọ nkà ma ọ bụ ndekọ ịgbakwunye mgbe ahụ enweta 'Sinụ Info' na mgbe ahụ enweta 'Tinye'. Ịzọpụta mgbanwe pịa 'Ok'
Photo 5: agbakwụnye Images / Photos / Arts
Iwepu duplicates dị mfe ma ọ bụrụ na mkpado e tidied. Site Dezie menu, enweta 'Gosi oyiri Songs' na ha nile ga-egosipụta. Ebe a, i nwere ike ime pụọ na otutu tracks na yiri aha ma ọ bụ nọmba. Dị nnọọ enweta 'ihichapụ' ka tufuo ha.
Tunesgo bụ a zuru okè ngwá ọrụ na ịkpụ ID3 mkpado n'ụzọ dị irè karịsịa ndị folks ndị na-nri ye mgbe niile na-efu ID3 nkọwa maka listi ọkpụkpọ ma ọ bụ egwu. The ezi ihe banyere usoro a bụ na ị nwekwara ike iji ya dị ka ọkpụkpọ. Ị nwere ike comfortably egwu ma ọ bụ na-ege ntị songs site ya. N'ezie, nke a bụ nnọọ mfe ọrụ niile ị chọrọ ime bụ eso ndị a.
Gaa Leta ukara website nke Tunesgo na mgbe ahụ ibudata ma wụnye usoro ihe omume. Nbudata na wụnye ga na-ewe a di na nwunye nke nkeji.
Mepee usoro ihe omume. Mgbe nke a na-mere, iTunes Library bụ scanned ozugbo. Niile listi ọkpụkpọ ma ọ bụ egwu na-egosipụta na faịlụ tree. Photo 6: launching Tunesgo
Mbubata songs ma ọ bụ traktị dị na Obodo nchekwa. Nke a nwere ike mfe-mere site na ịpị 'My Music' na mgbe ahụ ịdọrọ na dobe nchekwa nke e dere họrọ tracks na faịlụ tree. Photo 7: ahọpụta n'Ụzọ
Malite fixation nke ID3 mkpado. Usoro a ga-amalite mgbe ị na-ahọrọ abụ na ị chọrọ idozi ya nkọwa na mgbe ahụ na ịpị mata bọtịnụ. Ị nwere ike nakwa họrọ multiple tracks. Ị nwere ike mgbe amalite ịgbanwe tracks 'nkọwa, artist aha na ọtụtụ ndị ọzọ. Photo 8: ahọpụta n'Ụzọ Ị Mkpa Ofu
Chọta na iwepụ duplicated tracks ma ọ bụ songs. Niile i nwere ime bụ iṅomi playlist ma ọ bụ egwu. Nke a nwere ike nakwa aka na gwara ọtụtụ ID3 mkpado maka tracks. Enweta 'Tinye' nke na ID3 mkpado na-agbakwunyere na tracks. Họrọ track mgbe ahụ enweta 'Mee' na ị na-eme. Photo 9: Inweta oyiri n'Ụzọ & Fixing Ha
Malite na-eme mgbanwe banyere track ma ọ bụ song. Ị nwere ike ịnyegharị ma ọ bụ dezie a akpan akpan song. Ọzọkwa, ị nwere ike ịgbanwe artist si foto na onye ọzọ ma ọ bụ i nwere ike na-agụnye a pụrụ iche zuru ezu ma ọ bụ ozi banyere otu song ma ọ bụ egwu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe a cover ma ọ bụ ihe oyiyi dị nnọọ enweta 'Sinụ na-ekpuchi' na-agagharị na họrọ onye ị chọrọ. Ọ dị mfe ime nke a, ihe niile ị chọrọ ime bụ mgbata 'Dezie' na mgbe ahụ na-agbanwe ka ihe ọmụma dị ukwuu dị ka ị chọrọ banyere egwu ma ọ bụ song. Photo 10: edezi ID3 dịgasị iche iche Photo 11:-agbakwụnye na-ekpuchi / Images
Ọgwụgwụ - agwụcha Ndikere
Ọ bụrụ na ị na-eso n'elu nzọụkwụ, ị ga-ahụ na gwara ID3 mkpado na-akpaghị aka abụghị nsogbu ihe dị ka ị na-emekarị na-eche. Mgbe ọ na-n'ụzọ ziri ezi rụrụ, ị ga-enwe obi ụtọ na otú gị music n'ọbá akwụkwọ bụ n'ụzọ zuru okè mere ndokwa si otú a mee ka ọ dị mfe jikwaa tracks. Ọ dịghị mkpa na nke usoro ị na-aga n'ihi na ma nke ha na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ oké mkpa na-eme ka n'aka na Tunesgo bụ dakọtara na ekwentị gị ma ọ bụrụ na ị na-ekpebi iji ya.
> Resource> Utility> otú ndozi ID3 Tags Ọma, Update n'Ụzọ 'Artist, Mbụ, Genre wdg